Myanmar Network အတွက် စာမူရှင်များအားဖိတ်ခေါ်ခြင်း - Myanmar Network
Myanmar Network အတွက် စာမူရှင်များအားဖိတ်ခေါ်ခြင်း
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on January 20, 2016 at 10:58 in ကြေငြာချက်၊ အကြံပြုချက် နှင့် အကူအညီတောင်းခံခြင်း (Announcement, Comments & Help)
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ စီစဉ်သည့် Myanmar Network တွင် အသုံးပြုရန် မြန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများအတွက် စာမူများ ရေးသားပေးပို့ရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ဆောင်းပါးများမှာ ပညာရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများနှင့် လူငယ်/လူရွယ်များအတွက် ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်များ အကြောင်းဖြစ်ရမည် ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာ သင်ခန်းစာများ မဖြစ်ရပါ။ Myanmar Network တွင် အသင်းဝင်ထားသူ ၈၅% ခန့်မှာ အသက် ၁၈ နှစ်မှ ၃၅ နှစ် အရွယ်များ ဖြစ်၍ အဆိုပါ အသက်အပိုင်းအခြားတွင်ရှိသော သူများအတွက် စိတ်ဝင်စားစေမည့် ဆောင်းပါးများကို ဦးစားပေးဖော်ပြသွားပါမည်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော သူများ၊ အလုပ်ရှာဖွေနေသော သူများအတွက် အကျိုးရှိမည့် ဆောင်းပါးများကို ပိုမိုဦးစားပေးရွေးချယ်သွားမည်။
အခြား စာအုပ်၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားခြင်း နှင့် အွန်လိုင်းမှ အခြား website များတွင် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိရပါ။ ZawgyiOne font ၊ စာလုံး ဆိုက် ၁၀ ဖြင့် ရေးသားထားကာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံများ စစ်ဆေးထားပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ A4 စာမျက်နှာ အနည်းဆုံး တစ်မျက်နှာခွဲ မှ အများဆုံး သုံးမျက်နှာ ရှိရမည်။ ဆောင်းပါးများမှာ အဓိက မြန်မာဘာသာဖြင့် ရေးသားရမည်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးများမှ ကိုးကားထားပါက အတတ်နိုင်ဆုံး မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဆောင်းပါးများမှ ကိုးကားနိုင်သော်လည်း ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်မှ တိုက်ရိုက် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း မရှိရပါ။ စာမူများပေးပို့ရာတွင် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များကို ဖော်ပြပေးစေလိုပါသည်။
ရွေးချယ်ခံရသော စာရေးအတွေ့အကြုံရှိရန်မလိုပါ စာရေးဝါသနာပါသူ မည်သူမဆို ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ပေးပို့သော ဆောင်းပါးများကို Myanmar Network Admin အဖွဲ့ မှရွေးချယ်မည်ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရသော ဆောင်းပါးများကို ပို့ပြီး (၂) ပတ်အတွင်း အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ကာ ဆောင်းပါးပိုင်ရှင်များအား ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်လျှင် ဉာဏ်ပူဇော်ခ ကျပ် ၁၃,၀၀၀ ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သော စာရေးသူများသာမက နိုင်ငံတကာမှ စာရေးသူများအား ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရသည်ဖြစ်စေ မခံရသည်ဖြစ်စေ အီးမေးလ်မှတဆင့် ပြန်လည် အကြောင်းကြားပေးပါမည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် ဆောင်းပါးများကို အီးမေးလ် britishcouncilmarcomms@gmail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Ei Thawda on January 20, 2016 at 11:38
Kindly find the attached file for the article.
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on January 21, 2016 at 11:53
ဆောင်းပါးများကို အီးမေးလ် britishcouncilmarcomms@gmail.com သို့ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Nyan Nissara on January 20, 2016 at 14:40
ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးများ လက်ခံပါသလား။ သိလိုပါသည်။
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on January 21, 2016 at 11:54
Permalink Reply by Aye Nyein on January 21, 2016 at 14:29
Facebook ၌ ဖော်ပြထားသော ဆောင်းပါးများ လက်ခံပါသလား ခင်ဗျား။
ရွေးချယ်ထားသော စာမူများကို မည်ကဲ့သို့ အသုံးချပါမည်လဲ (ဥပမာ - ယခု စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြမည်။ သို့မဟုတ် အခြား published media တစ်ခုခုတွင် ဖော်ပြမည်)
AdminPermalink Reply by Myanmar Network on January 21, 2016 at 14:33
Myanmar Network အတွက်အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်တိုင်ရေးသားထားသော ဆောင်းပါးများအားလုံး ပေးပို့နိုင်သည်။
Permalink Reply by Ma Khin Myo Thet on February 3, 2016 at 8:23
ဆောင်းပါးတွေကို နောက်ဆုံးထားလက်ခံမယ့်ရက် သိပါရစေ ။
Permalink Reply by 3u3lszo26kg5p on February 15, 2016 at 15:03
How about science post for educational pupose. it that okay in Myanmar Network article.
Permalink Reply by kyi kyi on February 24, 2016 at 23:00
ပို့ထားပါတယ်Zawgyi Fontမရှိလို့ Frozen keyboardနဲ့ပဲ စာရိုက်ပြီးပို့လိုက်တာပါ။ဆုရဖို့တော့မမျှော်လင့်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ ပို့ထားတဲ့စာမူကို ဝေဖန်ပေးစေချင်ပါတယ်။စာအရေးအသားနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ့်မှာtalentရှိမရှိ သိချင်လို့ပါရှင်။
Permalink Reply by Zaw Nyein Aye on February 24, 2016 at 23:26
British Council လို ခိုငျမာတဲ့ အဖှဲ့အစညျး တဈရပျအနနေဲ့ Zawgyi-One အစား နိုငျငံတကာ စံနှုနျးမီတဲ့၊ ကမ်ဘာက လကျခံတဲ့ မွနျမာ ဒဈဂဈြတယျ ဖောငျ့ (Myanmar Unicode Standard Font) တဈခု အသုံးပွုဖို့ အကွံပွုပါရစေ ခငျဗြာ။ ဘာသာစကား၊ နညျးပညာ တိုးတကျရေးအတှကျ မွနျမာနိုငျငံရဲ့ ရရှေညျ အနာဂါတျကို မြှျောတှေးကွညျ့ပါ။ ဒီ Website မှာ ဖျောပွထားတဲ့ အကြိုးရှိတဲ့ စာတှကေိုလညျး နောကျနှဈမြားစှာတိုငျ အလှယျတကူ archive မှာ indexing လုပျမယျ၊ listing/ sorting လုပျမယျ၊ အငျတာနကျ၊ Google စတာတှကေတဈဆငျ့ ပွနျရှာခငျြမယျဆိုရငျ ယူနီကုဒျစနဈဖောငျ့ကို သုံးမှရမှာပါ။ အလေးအနကျထား စဥျးစားပွီး ပွောငျးလဲမှုကို ဦးဆောငျကွညျ့ပါ။ လကျရှိ သုံးစှဲသူအခြို့ (သို့) တျောတျောမြားမြား ခဏတော့ ကသိကအောကျ ဖွဈနိုငျ၊ ဝဖေနျနိုငျပမေယျ့ ရရှေညျမှာ သုံးစှဲသူက လိုကျပါလာမှာ အသအေခြာပါ။
British Council လို ခိုင်မာတဲ့ အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်အနေနဲ့ Zawgyi-One အစား နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းမီတဲ့၊ ကမ္ဘာက လက်ခံတဲ့ မြန်မာ ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖောင့် (Myanmar Unicode Standard Font) တစ်ခု အသုံးပြုဖို့ အကြံပြုပါရစေ ခင်ဗျာ။ ဘာသာစကား၊ နည်းပညာ တိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ရေရှည် အနာဂါတ်ကို မျှော်တွေးကြည့်ပါ။ ဒီ Website မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ စာတွေကိုလည်း နောက်နှစ်များစွာတိုင် အလွယ်တကူ archive မှာ indexing လုပ်မယ်၊ listing/ sorting လုပ်မယ်၊ အင်တာနက်၊ Google စတာတွေကတစ်ဆင့် ပြန်ရှာချင်မယ်ဆိုရင် ယူနီကုဒ်စနစ်ဖောင့်ကို သုံးမှရမှာပါ။ အလေးအနက်ထား စဉ်းစားပြီး ပြောင်းလဲမှုကို ဦးဆောင်ကြည့်ပါ။ လက်ရှိ သုံးစွဲသူအချို့ (သို့) တော်တော်များများ ခဏတော့ ကသိကအောက် ဖြစ်နိုင်၊ ဝေဖန်နိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ သုံးစွဲသူက လိုက်ပါလာမှာ အသေအချာပါ။
Permalink Reply by Ei Myat Hlaing on March 18, 2016 at 12:36
Microsoft Word File နဲ့ attach လုပ်ပို့ပေးရမှာလားရှင့်
Permalink Reply by Science Scopian on April 19, 2016 at 17:24
မင်္ဂလာပါ ခ​ဗျ ကျွန်​​တော်​​ဆောင်းပါးပို့ ပြီးပါပြီ